Automotive Parts mamolavola | Tsindrona koronosy Service - CBPMM
Inona no Automotive Parts koronosy
Automotive faritra mamolavola mpanamboatra ny plastika Tafiditra ao amin'ilay fiara mampiasa ny fampidirana dingana koronosy. Ny dingana dia ampiasaina noho ny mpanamboatra manan-danja ampahany ny fiara sy ny ivelany ny Atitany.
Ny fampidirana dingana koronosy no ampiasaina amin'ny mamokatra ny 90% ny fiara ao amin'ny faritra fiara. Plastika tena malaza ao amin'ny orinasa toy ny fiara izy ireo maivana, mora ny ORINASA MPANAMBOATRA, ary tena mateza koa.
Miaraka amin'ny fielezan'ny fampiasana ny fampidirana dingana koronosy, ny faobe faritra famokarana ny fiara lasa tsotra ary tena vola lany-mahomby.
Maro an'isa ny tapaky ny fiara azo namokatra tena haingana mampiasa ny teknolojia sy ny famokarana satria atao amin'ny ampahany, ny vidiny dia tena kely.
Ny fiara orinasa efa nandray soa be dia be avy ao amin'ny orinasa mpamokatra entana tsindrona koronosy teknika. Izany dia orinasa izay miantehitra amin'ny faritra sy ny fametrahana mazava tsara singa izay miorina, miovaova, ary azo antoka ny mampiasa.
Noho izany, tsindrona koronosy dia iray amin'ireo tsara indrindra ho an'ny orinasa mpamokatra entana, rafitra ny orinasa araka ny fantatra amin'ny mpanamboatra tena marina, mitovy, ary tsy miovaova faritra.
The manufacturing process has negligible to nil precision errors which are very useful in the automotive industry. The parts manufactured using the injection molding process are very strong and mateza which is a must for the automotive industry.
With the use of injection molding technology, the automobiles have become lightweight which increases their solika fahombiazana and also safer with the production of faran'izay tsara sy mateza parts.
Ny tsindrona plastika lasitra dingan'ny no iray amin'ireo tsara indrindra teknolojia mba mpanamboatra mateza sy ny kalitao avo-moto faritra sy ny singa. Maro ireo tombony amin'ny fampiasana ny teknolojia ho an'ny orinasa mpamokatra entana ny môtô faritra. Ny sasany amin'ireo tombony lehibe dia toy izao manaraka izao:
Mahomby Production Process
Ny fiara mamolavola faritra dia tena mahomby orinasa mpamokatra entana dingana. Be dia be ny fiara faritra azo vokarina amin'ny alalan'ny dingana ity.
Ny vokatra vokarina mampiasa ity dingana ity no tena marina tsara-monina, mitovy, ary tsy miovaova.
Ny vokatra azo vokarina amin'ny tena kely kokoa ny fotoana izay manampy bebe kokoa ny fahombiazana amin'ny orinasa mpamokatra entana dingana. Tsindrona koronosy dingana manome fahafahana ny mpanamboatra fiara amin'ny faritra efa ho aotra fahadisoana tahan'ny.
Ny fiara vokarina faritra mampiasa ity dingana ity dia ny tena faran'izay tsara. Ny vokatra dia maivana, Scratch-mahatohitra, sy hanova zavatra mahatohitra.
Ny fiara dia maivana faritra izay Manatsara ny solika ary koa fahombiazana mahery dia mahery, izay mahatonga azy ireo tena mateza.
Ny fiara sy ny indostria ny ampahany mitaky ny singa faran'izay tsara ho ampiasaina amin'ny fiantohana ny fiarovana , ary noho izany ny fampidirana dingana koronosy no tsara indrindra ho an'ny orinasa.
Manufacturing ny fiara faritra mampiasa ny fampidirana teknolojia koronosy dia tena vola lany-mahomby. Ny vola dia upfront lehibe ao amin'ny planina ny vokatra sy ny bobongolo. Rehefa izany dia izany, ny vokatra azo vokarina amin'ny bulk- amin'ny an'arivony, na dia tao millions- izay mitondra midina ny vidin'ny famokarana ankapobeny be.
Manovaova in Fampiasana akora
Ny fampidirana ny orinasa mpamokatra entana koronosy dingan'ny mamela ny manovaova ny fampiasana mihoatra ny iray resins plastika toy ny akora.
Ny manufactures Afaka mampiasa ny fitambaran'ny plastika hafa izay afaka mampitombo ny hery, mateza, ary ny kalitaon'ny ny vokarina faritra fiara.
Fillers koa hanampy ho amin'ny plastika resins mba hampitomboana ny hery sy ny Henjana ny vokatra vokarina.
Fampiharana for Common Automotive Parts koronosy
Ny faritra fiara mamolavola Lasa tena zava-dehibe ao amin'ny orinasa fiara. Ny lehibe ankamaroan'ny faritra fiara no vokarina mampiasa ny fampidirana dingana koronosy.
Ny dingana mahatonga ny mpanamboatra faran'izay tsara sy marina tsara mifototra amin'ny vokatra izay tena manan-danja ho an'ny orinasa ny fiara. Ny orinasa mpamokatra entana dia atao amin'ny ampahany dia be, ary noho izany dia tena vola-mahomby.
Toy ny fiara vokarina faritra mampiasa tsindrona koronosy dia tena maivana, dia manampy mba hanatsarana ny solika fahombiazana ny fiara. Ny sasany amin'ireo fiara mahazatra indrindra faritra izay vokarina mampiasa ny fampidirana dingana koronosy dia toy izao manaraka izao:
Ny fiara izay dashboards ity tranon'ny kobany ny fitaovana tahaka ny speedometer, habetsahan'ny solika, Stereo rafitra, sns no vokarina ny fampidirana dingana koronosy.
Tampoka tao anaty fiara vokarina amin'ny alalan'ny dingana ity dia Scratch-mahatohitra, fiantraikany-mahatohitra, ary tena mateza.
Ny casing ho an'ny headlight, taillight, mpanamarika lafiny sns in fiara no vokarina amin'ny alalan'ny dingana koronosy ny fampidirana.
Ireo tranga fahazavana azo vokarina mampiasa miaraka ny plastika izay manome kalitao sy mateza kokoa. Ny toe-javatra mazava dia maivana sy mateza ary mahatohitra ny fiantraikany izay miantoka ny ho ela velona.
Ny fiara bumpers efa nivoatra be rehefa mandeha ny fotoana. Tamin'ny voalohany, dia natao avy electroplated vy ary avy eo avy amin'ny aluminium. Avy amin'ny 1980 manomboka, izy ireo vita amin'ny plastika.
Tsy mitovy karazana plastika toy ny fitaratra nanamafy polyesters, polyurethane, farany polypropylene, polycarbonates sns dia nampiasaina ho an'ny orinasa mpamokatra entana bumpers.
Ny vita amin'ny plastika bumpers tsindrona koronosy dia maivana noho ny vy amim-behivavy sy izy ireo tafarina tamin'ny vokatr'iny ny heriny tamin'ny fifandonana kely kokoa tsy misy fahavoazana maharitra.
Ny seza tao ny fiara dia vokarina mampiasa ny fampidirana teknolojia koronosy. Amin'ny alalan'ny fampiasana ny plastika isan-karazany, dia azo atao ny mpanamboatra seza maivana izay mahazo aina ny mipetraka sy azo nohidiana tao madinika voalamina tsara toerana.
Ny seza vokatra amin'ny alalan'ny dingana ity dia avo-kalitao sy ny Scratch-mahatohitra. Ny dingana ihany koa famokarana vola-tena mahomby raha oharina amin'ny orinasa mpamokatra entana fomba hafa.
Ny varavarana kobany amin'ny fiara dia namoaka ny fampidirana dingana koronosy. Ny varavarana kobany tsy hoe manome fahafahana hahazo ny interiors, fa manome ihany koa ny fiarovana rehefa nitondra fiara handeha.
Eo anoloan'ny varavaran'ny trano kobany javatra dia avy amin'ny plastika novolavolaina Functional singa amin'ny faritra ho an'ny fitehirizana. Ny varavarana kobany atao amin'ny fampiasana tsindrona dia fiantraikany koronosy-mahatohitra, maivana sy mateza. Ny endri-javatra maivana dia manampy amin'ny aina ny fampiasana ary koa fahombiazana Manatsara ny solika.
Ny familiana no ao fiara dia iray amin'ireo singa manan-danja indrindra ary vokarina ny fampidirana dingana koronosy. Ny mahazatra dia familiana no vokarina amin'ny alalan'ny mamolavola sahaza plastika toy ny polyurethane ny fototry ny vy.
Ny kodiarana no mamily navoakan'ny izany teknôlôjia izany dia tokony ho 20% maivana kokoa noho ny zokiolona no mamily kodia. Izany Manatsara ny fikarakarana sy ny maneuverability ny familiana.
Ny kodiarana ihany koa no mamily maharitra kokoa sy hanova zavatra vokarina mahatohitra rehefa mampiasa ny fampidirana teknolojia koronosy.